WORLNEWS:- Wiilkii Dilka ka geystay USA, Trump & Muslimka, Awooda Turkey & Rayid la laa’yay | WORLNEWS:- Wiilkii Dilka ka geystay USA, Trump & Muslimka, Awooda Turkey & Rayid la laa’yay | Hal Sheegaha La Hubo
WORLNEWS:- Wiilkii Dilka ka geystay USA, Trump & Muslimka, Awooda Turkey & Rayid la laa’yay
ASCWW, Jimco Wanaagsan dhamaan Akhristayaasha Warqaad.com, kuna soo dhawaada Wararkii Ugu Dambeeyay ee Caalamka.
Donald Trump Wuxuu Bartilmaameedsanayaa Muslimka
Dadaalka ugu badan ee ilaa haatan uu sameeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ah in dalkiisa uu udiiday qaxootiga dhowr wadan oo Muslim ah, laakiin arintaas ayaa axaa ka horyimid Maxkamadaha gobolada.
Afar kamid ah 9-kii go’aan ee uu Donald Trump kasoo saaray qaxootiga ayaa lagu tilmaamay iney ahaayeen kuwa muslimka looga soo horjeedo oo aan dastuuri aheyn.
Arintaan ayaa hoos u dhigtay taageeradii uu heli lahaa Hogaamiyaha lacagta haysta ee Donald Trump kaas oo marar badan bogiisa Twitter-ka ku sheegay inuu fulinayo balanqaadkisii ahaa inuu qaxootiga ka joojinayo dalkiisa.
“Go’aanada kasoo baxay madaxweyne Trump iyo saraakiishiisa, waxaa ay muujineysaa sida sharci darada ah ee ay uga soo horjeedaan muslimka iyo naceybka ay uqabaan,” sidaas waxaa yiri garsoore Roger Gregory wrote.
Mareykanka ayaa lo diiday dadka kasoo jeeda dalalka Muslimka ah ee kala ah Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria iyo Yemen, waxaa sidoo kale ku jira Waqooyiga Kuuriya iyo Venezuela.
Maxkamada sare ee Mareykanka ayaa bisha April dhagaysan doonta muranka la xariira amarka madaxweyne Trump.
Turkey oo Awood usheegtay Daacishka Siiriya
Wadar ahaan 1,551 oo katirsan kooxaha PYD/PKK iyo Daacish ayaa lagu laayay howlgalkii Turkey uu ka waday dalka Siiriya sidaas waxaa jimcihii maanta sheegay sargaal Turkey u hadlay.
20-kii bishii January , Turkey ayaa bilaabay howlgalkan si ay ucirib tiraan koxaha PYD/PKK iyo Daacish oo ku xooganaa gobolka Afrin ee waqooyi Galbeed Siiriya.
Sargaalka u hadlay Turkey ayaa sheegay in ujeedada howlgalkaas uu yahay in xaduuda dalkaas uu la leeyahay ay kuso celiyaan amaankii iyo kala dambeyntii.
Ku dhawaad 18 qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubeysan ka geysteen gobolka Samfara ee Waqooyi Galbeed Nigeria, sidaas booliska ayaa xaqiijiyay.
Koox hubeysan ayaa weeraray meel ay ku badnaayeen dad shacab ah, waxaana 18-ka qof ee dhintay ay ahaayeen shacab deegaanka ah.
“Dadka deegaanka ayaa waxaa weeraray rag aan heybtooda la garan, laamaha amaanka ayaana baaraya sababta ay falkaas u geysteen,” sidaas waxaa yiri sargaal booliska u hadlay.
Sedex Maalin kahor ayay sidaan oo kale rag hubeysan ay shan qof ugu dileen gobolka Plateau ee isla dalkaas Nigeria.
Kumuu ahaa Ninkii Dadka badan ku laayay Iskuul Ku yaala Mareykanka
Mid ka mid ah ardayda dhigata iskuulka ayaa sheegay in marar hore ardayda ay wiilkan kula kaftameen in uu maalin noqon doono nin toogasho ba’an ka geysta iskuulka.
“Cunugaas waxa uu leeyahay fiiro kuuris ah oo aad looga baqo, waan iska garan karay in uu qof wax yeeleeyn doono, balse ma ogeyn kan uu yahay iyo meesha” ayay tiri Shelby.
Garyaqaan ay maxkamadda u qabatay ayaa Mr Cruz ku tilmaamay bini’aadam nafsad ahaan u burburay.